एसईओ मा इमोजी को प्रभाव: के यो SERPs मा तिनीहरूलाई प्रयोग लायक छ? - Semalt उत्तर
तपाईंले खोज परिणाममा पृष्ठ र शीर्षकको वर्णन र शीर्षकहरूमा चित्रचित्रहरू सामना गरिसक्नुभएको हुन सक्छ। यो एक हँसिलो अनुहार, एक कार, एक विस्मयादिबोधक विन्दु, प्रश्न चिन्ह, र अधिक हुन सक्छ। यी चित्रहरु इमोजी हुन्। तिनीहरू केका लागि हुन्? तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने? ईमोजीको प्रभावमा के हुन्छ SEO ?
इमोजी: तिनीहरू केका लागि हुन्?
तपाईंलाई सम्भवतः इमोटिकन्सहरू चिन्नुहुन्छ, जुन तस्वीरहरू हुन् जुन तपाईं सामाजिक नेटवर्कहरू, पाठ सन्देशहरू, वा ईमेलहरूमा आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। ईमोजीको हो र मुस्कान उस्तै छन्? होईन, तर उनीहरूसँग निश्चित रूपले उस्तै प्रयोगहरू छन्, किनकि ती भावनात्मक राज्यहरूमा जोड दिन प्रयोग गरिन्छ र शब्दहरू प्रयोग नगरी सन्देशहरू दिन्छन्।
इमोटिकन्स टाइप गरिएका छन् र इमोजी चित्रमा छन्। तिनीहरू एकै समयमा सिर्जना गरिएको थिएन। इमोजी पहिलो चोटि १ 1999 1999 1999 मा देखाईएको थियो, तब उनीहरूलाई जापानका शिगताका कुरीताले प्रस्तुत गरेका थिए, जबकि इमोटिकले १ 198 2२ मा दिनको उज्यालो देखेका थिए। ती दुई बिचको महत्वपूर्ण भिन्नता भनेको यो हो कि इमोजीले भावनाहरूलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्दैन - छविहरूले जनावरहरू, वस्तुहरू, बिरूवाहरू, र अधिक। त्यस्ता चित्रहरूका धेरै कोटीहरू छन्। तल तपाई एक मध्ये सब भन्दा लोकप्रिय इमोजी हेर्न सक्नुहुन्छ साइटहरू जहाँ उनीहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
इमोजीले तुरून्त अनुप्रयोग भेट्टायो SEO। यी छविहरू कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र एसईओमा इमोजीको कुनै प्रभाव छ?
SEO मा emoji को प्रभाव
चित्रोग्राम प्रयोग गरेर, तपाईं केहि शब्दहरू बदल्न सक्नुहुनेछ र एकै साथ पाठको भिजुअल अपील बढाउनुहोस्। यस समाधानले मार्केटिंग विशेषज्ञहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्‍यो एसईओ विशेषज्ञहरु। तर के ईमोजीको प्रयोगले गुगलको जैविक परिणामहरूमा तपाईंको वेबसाइटको अधिक दृश्यतामा अनुवाद गर्न सक्दछ? SEO मा इमोजीको प्रभाव के हो?
SEO इमोजी - के यो एसईओमा इमोजी प्रयोग गर्न लायक छ?
चित्रोग्राम छिटो SEO विशेषज्ञहरु बीच लोकप्रिय भयो। पाठमा उनीहरूको उपस्थितिले पाठकहरूको ध्यान आकर्षण गर्‍यो। शीर्षक वा मेटा विवरणमा इमोजीले उच्च सीटीआरमा अनुवाद गर्न सक्दछ (दर मार्फत क्लिक गर्नुहोस्), जसले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न लायक बनायो। यद्यपि, २०१ 2015 मा, Google ले घोषणा गर्‍यो कि यसले लामो समयदेखि इमोजी समर्थन गर्दैन, अर्थात उनीहरू अब खोज परिणामहरूमा देखा पर्ने छैनन्।
यो निर्णयको कारण के थियो?
खैर, वेबसाइट को मालिकहरु उनीहरु दुर्व्यवहार बाट प्रतिस्पर्धा बाहिर अलग रहन। समय बित्दै जाँदा, खोजी नतिजामा पिकोग्रामहरूको संख्या घट्यो जब सम्म अन्तमा तिनीहरू हराउँथे। यो बाहिर निस्के पनि, गुगल ईमोजीसँग सँधै अंश गर्दैन। रंगीन आइकनहरू SERPs मा तुरून्त चाँडो, २०१ the मा फर्किए, तर खोज इञ्जिनले उनीहरूलाई प्रदर्शनको लागि नियमहरू परिमार्जन गरे।
गुगलले किन आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्‍यो?
वेबमा पिकोग्रामको लोकप्रियताको कारण सहित। जे होस्, यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू कुनै प्रतिबन्ध बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ, र खोज परिणामहरूले शीर्षक र मेटा विवरणमा राख्नु भएको सबै इमोजी देखाउँदछ। गुगलले ईमोजी देखाउने अधिकार मात्र सुरक्षित गरेको छ जब यो उचित हुन्छ। अभ्यासमा यसको अर्थ के हो? तपाई पक्का हुन सक्नुहुन्न कि प्रयोग गरिएको तस्वीरोग्राम SERPs मा प्रदर्शित हुन्छ।
इमोजीले के गर्न सक्छ SEO ? यो धेरै कारणका लागि तपाइँको रणनीति मा तिनीहरूलाई विचार लायक छ। तिनीहरूको प्रयोगका लागि धन्यबाद:
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट खोज परिणाम मा अधिक आकर्षक लाग्नेछ।
तपाईले प्रश्नमा भएको सन्देशको प्रकृति निर्धारित गर्नुहुन्छ।
तपाईंले सीटीआर बढाउनुहुनेछ - यदि यो सूचक उच्च छ भने, यसले गुगलको अल्गोरिदममा संकेत गर्दछ कि यूआरएल आकर्षक छ र यसले खोज परिणामहरूमा यसको उच्च स्थानमा अनुवाद गर्न सक्दछ। एकै समयमा, तपाईले उही स्थिति कायम गर्नुभयो भने पनि, एक राम्रो CTR भनेको तपाइँको वेबसाइटमा अधिक भ्रमण गर्दछ।
क्लिक थ्रु रेट सन्तोषजनक कहिले हुन्छ?
कुनै एकल, स्पष्ट सीमाको सीमा पछाडि छैन जुन हामी विश्वासका साथ विचार गर्न सक्छौं कि हाम्रो विज्ञापन प्रभावकारी छ। यो प्रत्येक व्यवसायको लागि फरक हो, र प्रत्येक प्रकारको अभियानको लागि। यदि तपाइँ तपाइँको अभियानमा CTR कत्तिको सन्तोषजनक छ भन्ने निर्धारण गर्न चाहानुहुन्छ, त्यस्तै सर्तहरूमा परिणामहरूको आधारमा तुलनात्मक रेटिंग सिर्जना गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि कम क्लिक थोरै रेट स्कोरले तपाईंको विज्ञापन समावेश गर्दैन। त्यहाँ जहिले पनि केहि कारकहरू छन् तपाईको स्कोर बढाउन सुधार गर्न। प्राय: यो वर्णन वा हेडिंगको परिवर्तन हुन्छ। कहिलेकाँही कम परिणाम विज्ञापन परिक्षणको कारण हुन्छ। प्रत्येक विज्ञापन समूहको एक उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छ र एक विफल हुन्छ।
गुगलमा खोजी गर्दा तपाई इमोजी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। I तपाईं तिनीहरूलाई खोजी फाँटमा थप्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि। एक कुञ्जी शब्द बदल्दै।
गुगलले केवल ती नतिजाहरू प्रदर्शन गरेको चित्रको साथ हामीले प्रयोग गर्यौं
उदाहरणको लागि, यदि पिज्जारियाले शीर्षकमा त्यस्तो इमोजी प्रयोग गर्दछ, सामग्रीमा मेटा विवरण, तब यो यस्तो प्रश्नहरूको लागि खोजी परिणामहरूमा उच्च पदहरूमा देखा पर्न सक्दछ। अवश्य पनि, इमोजीको प्रयोगका साथ खोजी धेरै लोकप्रिय छैन, तर वेबसाइटमा यति साधारण संशोधनका लागि तपाईले केहि अरू भ्रमणहरू पनि पाउनुभयो भने पनि यो लायक छ। सबै पछि, यी प्रयोगकर्ताहरू तपाइँको नियमित ग्राहकहरू बन्न सक्छन्।
यसबाहेक, अनुसन्धानले देखाउँदछ कि सकारात्मक प्रतीकहरूको प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो वार्तालापको मुड र विश्वास सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। एडोबले विश्व ईमोजी डे २०१ on मा १,००० अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूको सर्वेक्षणको नतीजा साझा गरे। यो इमोजी ट्रेंड रिपोर्ट थियो। उत्तरदाताहरु भन्छन् कि:
ईमोजी प्रयोग गर्ने वार्तालाप अधिक मैत्री र पुग्न योग्य हुन्छन् - %१%;
इमोजी प्रयोग गर्नाले अन्तर्क्रियाको मित्रता बढाउँदछ - %०%;
पिकोग्रामको प्रयोगले कार्यमा विश्वसनीयतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ -% 63%;
तिनीहरू भावनाहरू व्यक्त गर्न इमोजी प्रयोग गर्छन् जुन पाठमा व्यक्त गर्न गाह्रो हुन्छ -% 65%।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, इमोजी राम्रो समाधान हो SEO मात्र होईन। तिनीहरूले वेबसाइटमा सन्देशको अधिक प्रभावकारितामा प्रभाव पार्न सक्दछन्, यसको पक्कै पनि यसको अर्थ हुँदैन कि यो हरेक मामिलामा काम गर्दछ।
इमोजिस कहाँ प्रयोग गर्ने?
तपाइँ पृष्ठ कोडको विभिन्न भागहरूमा इमोजी राख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग सम्बन्धित:
यद्यपि यो प्रयोग गर्न यो उत्तम ठाउँ होइन। यदि ठेगाना सुवाच्य र प्रयोगकर्ता-अनुकूल छ भने यो उत्तम छ। महत्त्वपूर्ण रूपमा - यो निश्चित छैन कि खोज इञ्जिनले इमोजी देखाउनेछ। यदि यो गर्दैन भने, तपाईले यसको सट्टा एक स्ट्रिंग देख्नुहुनेछ। यो राम्रो देखिदैन।
त्यो <title> </title> ट्याग बीचको पृष्ठको <head> पृष्ठमा छ। र यो पक्कै पनि राम्रो स्थान हो emojis प्रयोग गर्नका लागि।
यो <descript> </descript> ट्याग बीचमा छ। यो इमोजी प्रयोग गर्न पृष्ठको एक राम्रो अंश हो, जबसम्म तपाईं तिनीहरूसँग ओभरबोर्डमा जानु हुँदैन र सन्देश कम आकर्षक बनाउँनुहुन्न।
लेख को सामग्री
यो एक पर्याप्त समाधान हो। तपाइँ सामग्रीको साथ प्राप्तकर्तालाई रुचि दिन सक्नुहुन्छ, र यसको टुक्रा SERPs मा प्रदर्शन हुन सक्छ।
इमोजी कसरी प्रयोग गर्ने?
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ, २०१ 2015 मा, गुगलले खोज परिणामहरूमा चित्रचित्रहरू प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरे किनभने उनीहरू दुर्व्यवहार भए। हालमा, इमोजीको प्रयोगको बाबजुद, तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्न कि तिनीहरू गुगल परिणामहरूमा देखा पर्ने छन्। यो खोज ईन्जिन एल्गोरिथ्ममा निर्भर गर्दछ। चित्रोग्राम प्रयोग गर्दा, यी नियमहरू पालना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्:
आइकनहरूको संख्याको साथ ओभरबोर्डमा नजाउनुहोस्
इमोजीसँग धेरै फाइदाहरू छन् तर बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्। केहि लेखकहरूले धेरै यूआरएल र शीर्षकमा धेरै चित्रचित्रहरू प्रयोग गरे। के यो राम्रो र आमन्त्रित देखिन्छ? यो ठेगानामा तपाईले के पाउनु हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्न गाह्रो छ।
इमोजी हरेक ब्रान्डको लागि होईन
पिज्जाइरियाको अवस्थामा, पिक्चरोग्रामको उपयोग गर्नु राम्रो विचार हो, एक डाक्टरले डाक्टर आइकनको प्रयोग सँधै सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्दैन। तपाईंले प्रतीकहरू लागू गर्नु अघि, तपाईंको लक्षित समूहको प्रतिक्रियाको बारेमा सोच्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले तपाईंको इमोजी लागू गर्नुभयो, ट्र्याक राख्नुहोस् यसले कसरी तपाईंको CTR लाई असर गर्दछ। यसका लागि गुगल खोजी कन्सोल प्रयोग गर्नुहोस्। जाँच गर्नुहोस् कि यो सूचक मूल कत्तिको थियो र कति परिमार्जन पछि। यद्यपि, विश्लेषणमा सम्भावित स्थिति परिवर्तनहरू समावेश गर्न नबिर्सनुहोस्।
इमोजी कसरी थप्ने?
पहिले नै थाहा छ तपाई ईमोजी जाँच गर्न चाहानुहुन्छ? तिनीहरूको प्रयोग धेरै सजिलो छ र कुनै प्रोग्रामिंग ज्ञान आवश्यक छ। पहिले, पृष्ठमा जानुहोस् जुन तपाईंको पिकग्रामहरूको स्रोत हुनेछ। यहाँ आइकन स्रोतका केहि उदाहरणहरू छन्:
चित्रचित्र थप्नका लागि, उदाहरणका लागि, यी वेबसाइटहरू मध्ये पहिलोका श्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्। वेबसाइटमा खोज इञ्जिन प्रयोग गरेर, तपाईंलाई मनपर्ने आईकन फेला पार्नुहोस्। यसलाई हुन दिनुहोस्, उदाहरण को लागी, एक उपहार। उपहार प्रतिमा परिणाम सूचीमा प्रदर्शित हुनेछ। यसको नाममा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसोभए तपाईंले त्यसको वर्णन र यसको तल "प्रतिलिपि" बटन देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। पहिले Google खोजी परिणामहरूमा यसको लागि खोजी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। खोजी बाकसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि टाँस्नुहोस् विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
यो पृष्ठमा इमोजी थप्न मात्र सजिलो छ। मानौं कि तपाई पहाडमा आकर्षणको बारेमा लेख सम्पादन गर्न चाहानुहुन्छ, शीर्षकमा हिमालहरू देखाउँदै आइकन थप्दै। यसको प्रतिलिपि गरेपछि, लेख संस्करणमा जानुहोस्। यदि यो WordPress को वेबसाइटमा All मा एक SEO वा Yoast SEO प्लगइन स्थापना भएको हो भने, आइकन Google मा खोजी गर्दा शीर्षक क्षेत्रमा प्रतिलिपि र टाँस्ने आदेशहरू प्रयोग गरेको हिसाबले पेस्ट गर्नुपर्दछ।
प्रभाव निम्नानुसार छ। यदि तपाइँ यो वा त्यो उही अनुप्रयोगको साथ प्लग-इन प्रयोग गर्नुहुन्न भने, पोष्टको शीर्षकमा पिक्चरोग्राम टाँस्न पर्याप्त छ र तपाइँले उही परिणाम पाउनुहुनेछ।
खोज परिणाममा पिक्टोग्राम देखा पर्नका लागि तपाईले गुगल रोबोटको भ्रमणका लागि कुर्नु पर्नेछ र पृष्ठको पुन: अनुक्रमणिकामा। यद्यपि तपाईसँग १०० प्रतिशत छैन। निश्चित गर्नुहोस् कि इमोजी देखिनेछ। उही तरीकाबाट, तपाई पृष्ठ वर्णनमा प्रतिमा थप्न सक्नुहुन्छ।
निष्कर्ष: इमोजी - प्रयोग गर्नुहोस्, तर मोडरेटमा
पिकोग्राम प्रयोग गर्न लायक छ। तिनीहरूले तपाइँमा परिणाम दिन सक्छन् एक उच्च CTR रही र प्रयोगकर्ता अधिक सामग्री आकर्षक। यद्यपि, संयम व्यायाम याद गर्नुहोस्। यसलाई आइकनहरूको संख्याको साथ अधिक नगर्नुहोस्। यदि त्यहाँ धेरै छन् भने, प्रभाव प्रतिक्रियात्मक हुन सक्छ, र सम्भवत गुगलले पनि ती सबै प्रदर्शन नगर्न सक्छ।
जहाँसम्म, यदि तपाईंलाई ईमोजी तपाईंको साइटको एसईओ मा प्रयोग गर्न कुनै कठिनाई छ भने, सरलता Semalt सम्पर्क गर्नुहोस्, SEO मा विशेषज्ञता एउटा एजेन्सी। वास्तवमा, Semalt तपाईलाई दिनको २ hours घण्टा सहयोग गर्न योग्य विज्ञहरू छन्, तपाईको मूल भाषाको पर्वाह नगरी। किनभने Semalt ११ भन्दा बढी फरक भाषाहरूमा काम गर्दछ उच्च प्रदर्शन SEO उपकरणहरू र उच्च-गुणवत्ता सेवाहरूको साथ।
उपकरणको कुरा गर्दा, हामी उद्धृत गर्न सक्छौं Semalt.net : तपाईंको कम्पनीको लागि शक्तिशाली SEO उपकरणहरू। तपाईको वेबसाइटको पूर्ण विश्लेषण सुरू गर्न तपाईको डोमेन प्रविष्ट गर्न पर्छ।
साथै, गुणस्तरीय सेवाको कुरा गर्दा, हामीसँग main मुख्य सेवाहरू छन्: जुन म तपाईंलाई कडा आमतौरमा आमन्त्रित गर्दछु तपाईको वेबसाईटको द्रुत बृद्धिका लागि यी सुविधाहरू पत्ता लगाउन परामर्श गर्न। यी हुन्:
AutoSEO : छोटो सर्तहरूमा ठूला परिणामहरू
पूर्ण एसईओ : उन्नत एसईओ तकनीकहरू तपाईंको व्यवसायको लागि डिजाइन गरिएको
Semalt वेब एनालिटिक्स : Google TOP10 मा छोटो मार्ग प्रकट गर्दछ
धन्यबाद र अर्को पटक भेट्छु J